Alshabaab oo sheegtay dilka taliye ku xigeenkii booliska Baydhabo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Alshabaab oo sheegtay dilka taliye ku xigeenkii booliska Baydhabo
A warsame 3 June 2015
Mareeg.com: Al-Shabaab ayaa sheegatay dil shalay galab magaalada Baydhabo, ee xarunta gobolka Bay loogu geystay taliye ku xigeenkii ciidamada booliiska magaaladaas.
Goob-joogayaasha ayaa sheegay in nin bastoolad ku hubeysnaa uu dilay ku xigeenkii taliyaha ciidamada booliiska Baydhabo, Col. Caliyow Salaad, iyadoo ciidamo ka dhawaa goobta ay markaas kaddib toogteen ninkii dilka ka dambeeyey.
Al-Shabaab ayaa horay dilal uga geystay magaalada oo ay ku beegsadeen siyaasiyiin iyo saraakiisha ciidamada.
Mas’uuliyiinta maamulka koonfur-galbeed, ayaa sheegay in ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo ka dhan ah kooxaha dilalkaas ku lugta leh.